Maskaxda ayaa hadasha (Falimaha Rasuullada 8,29; 10,19; 11,12; 21,11; 1 Timoteyos 4,1; Cibraaniyada 3,7)
Maskaxda ayaa mararka qaar adeegsata magaca "I" (Falimaha Rasuullada 10,20; 13,2)
Ruuxa Quduuska ahi wuxuu sidoo kale na siiyaa hadiyado ruuxi ah. Hogaamiyeyaasha kaniisada ayuu siiyaa (Efesos 4,11), dadka sameeya hawlaha aasaasiga ah ee adeegga jacaylka ee kaniisadda (Rooma 12,6: 8) iyo kuwa leh xirfado gaar ah hawlo gaar ah (1 Korintos 12,4: 11). Qofna hadiyad ma leh, haddiyad walbana lama siiyo qof walba (Aayadaha 28aad). Dhammaan hadiyadaha, ha ahaato mid ruuxi ah iyo in kale, waa in loogu adeegsadaa shaqada guud ahaan - Kaniisadda oo dhan (1 Korintos 12,7:14,12;). Hadiyad kasta waa muhiim (1 Korintos 12,22: 26). Ilaa iyo hadda waxaan helnay hadiyaddii ugu horreysay ee Ruuxa, taas oo, si kastaba ha noqotee, ballanqaad badan ayey noo tahay mustaqbalka (Rooma 8,23; 2 Korintos 1,22; 5,5; Efesos 1,13-14).